यौन सम्पर्क गर्दा पातलो विर्य आउछ ? सन्तान नहुने समस्या हुन सक्छ ! – aajnepal
HomeHealthयौन सम्पर्क गर्दा पातलो विर्य आउछ ? सन्तान नहुने समस्या हुन सक्छ !
दैनिक यौन सम्पर्क गरेर कीटको संख्यामा कमी हुनु वा यसको गतिशीलता, स्वरूप इत्यादिमा प्रभाव पर्ने अनेक भित्रि कुरा हरु हुनसक्छन् । हामीले यौन सम्पर्कको बेला हुने भावनात्मक तनाव, यौन क्रियाकलापको क्रममा भएका समस्या, लिङ्ग उत्तेजनाका समस्या केही समयका लागि कम संख्यामा शुक्रकीट भएको देखिन सक्छ त्यो पनि समस्या हुने सक्छ ।
कुनै पुरुष सन्तानको पिता हुने–नहुने कुरा शुक्रकीटमा भर पर्छ । यो आवश्यक मात्रामा हुनुका साथै स्वस्थ (स्वरुप तथा गतिशीलताको सन्दर्भमा) पनि हुनुपर्छ । माथि नै भनियो कि एकपल्ट वीर्यस्खलन हुँदा यस्तै ३ देखि ५ मिलि (५मिलि भन्नाले १ चियाचम्चा जति) वीर्य निस्कन्छ । वीर्यमा हुने शुक्रकीटको संख्या संधै एकैनासको नहुन सक्छ तर यसको संख्या ४ देखि १२ करोड प्रतिमिलि लिटरसम्म हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । हामीले देख्ने वीर्यको सानो अंशमात्र शुक्रकीटले ओगटेको हुन्छ । शुक्रकीट निकै साना हुन्छन् ।प्रयोगशालामा सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको मद्दतले यसको परीक्षण गरिन्छ । सामान्यभन्दा कम संख्यामा शुक्रकीट हुनुलाई संख्या कम भएको भन्न सकिए पनि चिकित्सकिय दृष्टिकोणले शुक्रकीट कम भएको भन्न प्रतिमिलि लिटर वीर्यमा २ करोडभन्दा कम शुक्रकीट हुनुपर्छ । अहिले त २ करोडसम्मलाई पनि सामान्य भन्न थालिएको छ । तपाईको वीर्यमा कति शुक्रकीट छन् भन्ने कुरा पत्रमा उल्लेख छैन । एकपल्ट वीर्य परीक्षण गराउनुभए यस विषयमा जानकारी प्राप्त भैहाल्छ । कान्तिपुर साप्ताहिकले छापेको छ ।
शुक्रकीटको संख्यामा कमी हुनु वा यसको गतिशीलता, स्वरूप इत्यादिमा प्रभाव पर्ने अनेक कुरा हुनसक्छन् । भावनात्मक तनाव, यौन क्रियाकलापमा भएका समस्या, लिङ्ग उत्तेजनाका समस्या केही समयका लागि कम संख्यामा शुक्रकीट भएको देखिन सक्छ ।अण्डकोष लामोसम्म तातो वातावरणमा हुँदा शुक्रकीटको उत्पादनमै कमी आउँछ । त्यसै गरी कोकिन वा अन्य केही लागू पदार्थले पनि शुक्रकीटको संख्या तथा गुणस्तरमा कमी ल्याउँछन् । धूमपान त्यसको अर्को कारण हो । भिटामिन सी, सेलेनियम, जिंक वा फोलेटजस्ता कुराको कमी अर्को कारण हो भने लामो समयसम्म निरन्तर साइकल हाँक्नु पनि त्यसको कारण हुनसक्छ । धेरै मोटो हुनुको प्रभाव पनि यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा केही अध्ययनले देखाएका छन् । केही वंशाणुगत रोगले पनि यस्तो प्रभाव पारेको हुनसक्छ । त्यसैगरी वातावरणीय प्रदूषणको दीर्घकालीन सम्पर्कले पनि वीर्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् । विकिरण (एक्स रे वा अन्य)ले पनि शुक्रकीटको उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्छ । अर्कातिर पर्याप्त मात्रा स्खलन नहुँदा पनि शुक्रकीटको पूर्ण संख्यामा कमी आउन सक्छ ।